Bimetallic visy sy barika - Sina Bimetallic sy mpamatsy barika, Factory –Jwell
Ho an'ny volafotsy bimetallika, dia naka teknika mandroso (HP / HVOF) izahay amin'ny fizotran'ny fikorontanana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny volo manontolo, ny alika WPT1 miaraka amin'ny akanjo manohitra harafesina ho an'ny nilona, ​​PVC, PC, PMMA sns. fitafiana resitant amin'ny mari-pana ho an'ny vovoka andriamby, manezioma ary vovoka alumium, tsindrona bakelite sns. WPT2 dia mifanaraka amin'ny WPT3 sy WPT1.
Ho an'ny bimetallic anay, nampiakatra ny tahan'ny tungsten ao anaty alloy ho 30% ary 50% izahay teo aloha 10%, ary nampitomboinay koa ny halavan'ny fanodinana ho 4000mm tamin'ny halavany 3000mm teo aloha.
JWZ-BMHG500 / 1000 Machine milomano mitsivalana